ညီလင်းသစ်: အာရုံများ ပျံသန်းရာ နိုင်ငံကလေးသို့ (၅)
Posted by ညီလင်းသစ် au 12.4.12
ကိုညီလင်း ပုဂံပိုစ့် တက်လာတဲ့နေ့တိုင်း အိမ်မှာ တအိမ်လုံးကို ပတ် ရစ် နေတာ...
ပိုစ့်ကို လာဖတ်လိုက်... အိမ်ကလူတွေကို ပြလိုက် .. ပြဿနာရှာလိုက်...
ဒီ ဒီဇင်ဘာတော့ ကိုစိုးတင့်ကို သွားရှာနိုင်တန်ကောင်းပါရဲ့...း)
နှစ်သက်လို့ရေးတာ နှစ်သစ်လို့ဖြစ်နေတယ် သင်္ကြန်နှစ်သစ်ကို စိတ်ရောက်နေတဲ့ ကိုညီ...:P
အစ်ကိုရေ... အစ်ကို့ရဲ့ ဒီပို့စ်လေးတွေဖတ်ရတာ ဖတ်မ၀ဘူး..း)... ဘာပါနေလဲတော့မသိဘူး.. သာမန်ခရီးသွားအကြောင်းထက် ထူးခြားနေတာတော့ အမှန်ပဲ..း).. ဆက်ရန်ကိုလည်း စောင့်နေပါတယ်.... ထမင်းပန်းကန်ကို ကလေးက ဓါတ်ပုံရိုက်နေတာလား... ဘေးက မအိမ်သူလား..း))... စပ်စုသွားတယ်.. ဟဲ
Ko Nyi Linn Thit..
Very interesting posts..from part 1all the way to part5:)
Wishing you & family Happy Myanmar New Year..
ဘုရားပုံတွေအကြောင်း ရှင်းလင်းရေးပြထားတာ သဘောကျတယ်။ အဲလိုမှ ဒီက နားလည် သဘောပေါက်လွယ်တယ်။
ဓါတ်ပုံတွေ အကုန်လန်းတယ်ဗျာ။ နေရာရွေးတာကလဲ ပညာပါပါ့ဗျာ။ ကလေးရိုက်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုတွေကလဲ အမှတ်တရဖြစ်မှာပါ။ မကြေပွဲနွှဲခဲ့တဲ့ ဆင်းတုတော်ပုံကို အကြိုက်ဆုံးပဲ...
ပုံတွေ သိပ်လှတာပဲ (လို့ ထပ်ပြောသွားပြန်ပြီ)
ထမင်းဆိုင်မှာ သူ့ ကမ်ကော်ဒါနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ သားလေးက ချစ်စရာ....
အသုပ်ကိုတော့ ပဲစောင်းလျားသီးသုပ် (သို့) ကြောင်လျှာသီးသုပ်လို့ ထင်မိတာပဲ.. မန်ကျည်းရွက်ဖတ်လေးတွေလည်း မြင်သလိုလို....။
အဲလိုဆိုင်မျိုးမှာ အဲလိုဟင်းနဲ့စားချင်တာ... နောက်တခေါက်ပေါ့။
ဟိုတုန်းကဆို လမ်းဘေးဗမာဆိုင် ကောင်းကောင်းမရှိဘူးနော်။ ဆိုင်ခန်းနဲ့ရောင်းတဲ့၊ အိမ်ဝင်းထဲမှာရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေပဲရှိတယ်။ ခုမှ ဗမာဘုရားဖူးတွေများလာလို့ အဲလိုဆိုင်လေးတွေတွေ့ရတာ။ မန်ကျည်းရွက်သုပ် စားခဲ့ရတာ မနာလိုလိုက်တာ :D အသုပ်နောက်တပွဲက ပါတာကောင်းကောင်းမမြင်ရလို့ ဘာအသုပ်မှန်းမသိဘူး။ မြူရွက်သုပ်လား?
ကျမလည်း မြင်းလှည်းစီးရတာကြိုက်တယ်... မြင်ကွင်းကျယ်ပြီး နှေးတော့ ဘေးရှုခင်းကို ကောင်းကောင်းခံစားနိုင်တယ်။ တရုတ်ပြေးက အပေါ်ဆုံးရဲ့အောက်တထစ်အထိ တက်လို့ရသေးတယ် မဟုတ်ဘူးလား။ ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာတုန်းက ရသေးတယ်။
ပုံတွေ လှလိုက်တာ... ဆည်းဆာအောက်က နွားတွေနဲ့ဖုန်လုံးထနေတဲ့ပုံ အကြိုက်ဆုံးပဲ... နောက်တပို့စ် မြန်မြန်ဖတ်ရပါစေ...
မန်ကျည်းရွက်သုပ်ပုံကိုလဲ ဟိုတခါတုံးက ချဉ်ပေါင်ကြော်ပုံကိုကြည်.သလိုမျိုး တစိမ်.စိမ်.အကြာကြီးကြည်.ပြီး ပါးစပ်ထဲမှာ သွားရည်တွေပြည်.လာတယ်။ ဒုတ်ခကြီးလိုက်တာနော်။
စိမ်းပြာရောင်လွင်လွင်လေးရယ်၊ ချည်သားလေးပါးတားရားလေးရယ်၊ ခြေသလုံးနေရာမှာ အကျီလက်ဖောင်းလိုအစည်းပါတဲ.ဘောင်းဘီမျိုးမို. အရမ်းကြိုက်..
သားလေးကလဲ သူ.စိတ်ဝင်စားရာနဲ.သူ ၊လူကြီးလေးလိုပေါ.လေ။
ပြင်သစ်ဂိုက် လုပ်ခဲ့တာပါ၊ အလုပ်က တပြည်လုံး လျှောက်သွားနေရတော့ မြင်ဖူးနိုင်ပါတယ်ဗျာ၊း) အသုပ်က ကြောင်လျှာသီးသုပ်တော့ မဟုတ်ဘူးလို့ မှတ်မိတာပဲ..၊
တော်ကြာ အိမ်ကလူတွေက ကျနော့်ဘလော့ဂ်ကို black list ထဲ ထည့်လိုက်မှ ဒုက္ခ..၊း)) ဒီဇင်ဘာမှာ သွားနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ၊ ပုဂံက ဒီဇင်ဘာနဲ့ ဇန်နဝါရီမှာ လည်ဖို့ အကောင်းဆုံး၊ အလှဆုံး..၊ ကိုစိုးတင့်နဲ့ သွားဖြစ်ရင် ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ ကောင်းတဲ့နေရာတွေ လိုက်ပို့ပေးလို့သာ ပြောလိုက်ပါ၊ နေရာမထပ်အောင် သူ ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်၊း)
အေးဗျာ၊ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ မှားသွားတယ်နဲ့ တူတယ်၊း) ပြင်လိုက်ပါပြီ၊ ပြောပြတာ ကျေးဇူးပါပဲ၊ သဘောရှိသာ လောင်းသွားတော့ဗျာ..၊း)
ကြားရတာ ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ၊ ကျနော်လည်း ဘိန်းတွေ၊ ဘာတွေတော့ ထည့်မရေးမိပါဘူး၊း) ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ဟင်းပန်းကန်တွေကို ကျနော် ဓါတ်ပုံ ရိုက်တာမြင်တော့ သူကလည်း ကင်မ်ကော်ဒါနဲ့ လိုက်ရိုက်နေတာ..၊း) ဘေးက မအိမ်သူပါ..၊
လာလည်တာ ကျေးဇူးနော်၊ မကြာသော အချိန်မှာ ပြန်ခွင့်ရပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာ..၊
Ma War So ...
Thank you for your kind comment !!! I wish youaHappy Myanmar New Year too !!!
ကျနော် ရှင်းပြတာ အထောက်အကူဖြစ်တာ သိရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်၊ အေးဗျာ.. တခါတလေမှာ အချိန်မတန်သေးတော့လည်း ဒီလိုပဲ စောင့်ဆိုင်းရတာ ပါပဲ..နော၊
ခုတလော ပျောက်နေပါလား? အဆင်ပြေရဲ့လား? အေးဗျာ.. ကျနော်လည်း မရိုက်နိုင်မယ့်အတူတူ သူ့ကို ပေးထားတာမှ အမှတ်တရ ပုံတချို့ ပါလာမယ်လို့ တွေးတာပဲ၊ ပုံတွေကတော့ မိသားစုနဲ့ သွားတော့ ရသလောက် အချိန်ကိုလုပြီး ရိုက်ခဲ့တာပါပဲဗျာ..၊
ကျေးဇူးနော်၊ အသုပ်က ကြောင်လျှာသီးသုပ်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ၊ ပဲစောင်းလျားသီးက ပိုဖြစ်နိုင်တယ်၊ ကျနော်လည်း ခေါင်းပူအောင် စဉ်းစားပေမယ့် ဘာမှ ထွက်မလာဘူးဗျ..၊း)
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အဲဒီလို ထနောင်းပင်အောက်မှာ အဖီလေး ချထားတဲ့ ဆိုင်ရိုးရိုးလေးတွေမှာ စားရတာ စိတ်ချမ်းသာဖို့ ကောင်းတယ်၊ ဘာမှ ဟိတ်ဟန် မရှိဘူး၊ ဟင်းလေးတွေကလည်း အိမ်ချက်ပဲ၊ နောက်တခေါက် ရောက်တဲ့အခါ မန်ကျည်းရွက်သုပ် အဝစားခဲ့လေ၊း) ဟိုအသုပ်က မြူရွက်သုပ်လည်း ဖြစ်ဖို့များတယ်၊ အခု နည်းနည်း မှတ်မိသလိုလို..၊ တရုတ်ပြေး ပိတ်လိုက်တာ လပိုင်းပဲ ရှိပါသေးတယ်၊ အခု အတော်များများ ပိတ်ကုန်ပြီ၊ Temple type ဘုရားတွေ အကုန်နီးပါး ပိတ်ပြီး Stupa type ဘုရားတွေကို ပြန်တက်ခွင့် ပေးမယ်လို့လည်း ကြားခဲ့ရတယ်..၊ နောက်တစ်ပို့စ် အမြန်ဆုံး တင်ပါ့မယ်..၊း)
အဲဒီလောက်တောင်ပဲ လားဗျာ၊ ပုံတွေက သိပ်နှိပ်စက်ရာများ ကျနေပြီလား၊း) ဟုတ်ကဲ့၊ ဘောင်းဘောင်းအကြောင်းလည်း ပြောလိုက်ပါ့မယ်၊ သားကတော့ သူ့ကိုယ်သူ လူကြီးလို့ ထင်ချင်နေတာ.။း)
စာဖတ်လိုက် ပုဂံဘုရားဖူးလိုက်နဲ့ ဟန်ကျလို့ အစ်ကိုရေ... အစ်ကို့ ပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီး ပုဂံကို ဘုရားဖူးသွားချင်စိတ်က ပိုပိုဆိုးလာတယ်... ပြောလွန်းလို့ သူငယ်ချင်းတွေကတောင် အမြင်ကတ်နေကြပြီ... လောလောဆယ်တော့ အစ်ကို့ ပိုစ့်လေးနဲ့ စိတ်အာသာဖြေနေရတယ် အစ်ကိုရေ...
ဘယ်ပုံအကြိုက်ဆုံးပါလို့ တောင်မပြောနုိုင်အောင်ပါဘဲ။ ဒါလေးတော့အကြိုက်ဆုံးဆုိုပြီးဆက်ကြည့်တော့ဟင်ဒါလည်းအကြိုက်ဆုံး..ဆက်ကြည့်တော့..ဟင်ဒါလည်းအကြိုက်ဆုံးဆိုပြီးနောက်ဆုံးတော့အားလုံးအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ကုန်တယ်။း)
ပုံတွေကလှတယ်ဗျ။ ပုဂံရှုခင်းပုံတွေကြည့်ပြီး အိမ်ပြန်ချင်လိုက်တာဗျာ။ သားသားက အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းတယ်။
ပိုစ့်တွေတော့တင်တိုင်းဖတ်ဖြစ်တယ်ဗျာ။ကော်မန့် တော့သိပ်မမန့် ဖြစ်ဘူး။ပုံတွေအရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ။အကုန်လုံးလိုလိုကောင်းတယ်။ကြိုက်တယ်။ဘယ်အကြောင်းအရာ ပိုစ့်မဆိုရှင်းပြတာကို ကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်ဗျာ။ဗဟုသုတရလို့ ။ :D
ဒါနဲ့ ညဏ်မမှီတာလေးရှိလို့ မေးပါရစေ။ပုဂံလိုရှေးဟောင်းဘုရားတွေကိုနှစ်ကြာလို့ ပြင်ဆင်ပြန်တော့ ရှေးဟောင်းသုတေသီတွေက အော်တယ်။ရှေးဟောင်းလက်ရာတွေပျက်လို့ တဲ့။မပြင်ပြန်တော့ ....။ကိုညီကောဘယ်လိုမြင်လဲ။အဲ့လိုရှေးခေတ်လက်ရာတွေကိုမပျောက်ပျက်အောင်ဘယ်လို Maintain လုပ်သင့်သလဲ။
စကားမစပ်။ ။ မင်္ဂလာရှိသောမြန်မာနှစ်သစ်မှာ တစ်မိသားစုလုံးပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဗျာ။ :)
ပုံတွေ နဲ့ စာတွေ ကြည့်ပြီး မျက်တောင်ခတ်ဖို့ တောင် မေ့သွားတယ်။ အလင်း ၊ အမှောင်ယူထားတာတွေ အရမ်းလှတာပဲ။ အရှေ့ပိုစ့်က သနပ်ခါးလိမ်းထားတဲ့ သားသားလေးကလည်း ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ :)
Look, the way he concentrate on the display, like father like son, he must hvaphotographer spirit i believe, also, dusts in the cows shot bring up some atmospheres, favourite one, noted the detail of kosoetint, thanks.
အရင်က ပုဂံ ကို အထူးတလည်ချစ်စိတ် သွားချင်စိတ် မဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး။ ကိုညီလင်း ရဲ့ ပိုစ့်တွေ ဖတ်လိုက်ရတာ ထူးထူးခြားခြား သွားချင်စိတ် အရမ်းဖြစ်သွားတယ်။ ပုဂံ ကို ချစ်တဲ့တစ်ယောက်ကို ဒီပိုစ့်လေးတွေ ပြလိုက်ဦးမယ်။ ဓာတ်ပုံတွေကို အရမ်းကို ကြိုက်တယ်။ ကူးလို့ ရရင် ကူးထားချင်ပါတယ်။
ပုံတွေ လှလွန်းလို့ အသက်မရှူမိအောင်ဖြစ်ရတယ်
ဒီသင်္ကြန် ပုဂံသွားဖို့စိတ်ကူးထားတာ ဒါပေမဲ့ သင်္ကြန်ရက် ခရီးထွက်ဖို့ ကြောက်တာနဲ့ဘဲ မရောက်ဖြစ်တော့ဘူး
သေချာတယ်နော်။ ဓာတ်ပုံတွေ အများကြီးရိုက်ဖြစ်မှာ
ပုဂံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ အကောင်းဆုံး နေရာထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်လို့ ကျွန်မ ထင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုညီင်္လင်းသစ်တို့လို ရိုက်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တော့ ပုဂံဟာပိုလို့ သက်ဝင်လှပနေတော့တာ။
ပုဂံကိုဖြစ်နိုင်ရင်တနှစ်တခါ တခါသွားတပတ်နှစ်ပတ်လောက် သွားချင်တယ်
ကိုညိမ်းနိုင်လည်း သရပါ-၃ မှာ စားခဲ့သေးတာကိုး၊ ကျနော်တို့တော့ ခြေရာတွေ ထပ်နေပြီဗျ၊း) ကိုညိမ်းနိုင်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချနေပြန်ပြီ၊ အန်ကောဝတ်မှာ ရိုက်လာတဲ့ ပုံတွေ လှပါတယ်ဗျ...၊
စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါနိုင်ခင်မှာတော့ ဒီလိုပဲ အချက်အလက် စုဆောင်း၊ ပြင်ဆင်နေရမှာ ပါပဲ၊ အခါအခွင့်သင့်ရင်တော့ အရောက်သာ သွားပါဗျာ..၊း)
မအိုင်အိုရာ ပြောပုံက ကျနော်တို့ ကလေးဘဝ၊ ကစားစရာ ဆိုင်ထဲကို ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်တဲ့ အဖြစ်မျိုး သွားမြင်ပြီး ပြုံးမိတယ်၊း) ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်သက်တာ သိရလို့ ဝမ်းသာရပါတယ်ဗျာ..၊
ပုံမှန်လာလာ လည်တဲ့အတွက်ရော၊ ကွန်မန့်တွေ အတွက်ပါ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်..၊
ကျေးဇူးပါနော်၊ သားက မြင်းလှည်းတစ်စီး ဝယ်ပေး လုပ်နေလို့...မနည်း ပြောထားရတယ်၊း)
အမြဲဖတ်တယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ၊ ပုဂံဘုရားတွေကို ပြင်တဲ့နေရာမှာ အသစ်အတိုင်း ဖြစ်သွားအောင် ပြင်ကြလို့ ရှေးဟောင်းသမားတွေက မကြိုက်တာပါ၊ မပျောက်ဆုံးအောင် ထိန်းသိမ်းတာရယ်၊ ဆက်မပြိုအောင် ကာကွယ်တာရယ်၊ မူရင်းပုံစံ မပျက် ပြန်တည်ဆောက် တာရယ်.. ဆိုတဲ့ ရှေးဟောင်းရဲ့ မူတွေကို ကိုလင်းခန့်လည်း ကြားဖူးမှာပါ၊ ဆိုတော့ ရွှေမရှိခဲ့တဲ့ နေရာမှာ ရွှေတွေချ၊ ထီးတော် မရှိခဲ့တဲ့ နေရာမှာ ထီးတင်.. အဲဒီလိုတွေဆိုရင် မူလပုံစံကို ဖျက်ဆီးပြီး အသစ်လုပ်လိုက်တာ ပါပဲ၊ အဲ..ဘာသာရေး ရှုထောင့်က ကြည့်ပြန်တော့လည်း တမျိုးပေါ့လေ၊ ပြောရရင်တော့ အရှည်ကြီးပါပဲဗျာ၊ အချုပ်ကတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး အရင်ပုံစံအတိုင်း ပြန်ပြင်ပြီးတော့ နောက်ထပ် ဆက်မပြိုအောင် ကာကွယ်ဖို့ပါပဲ၊ မင်္ဂလာ ရှိသော မြန်မာနှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေဗျား...၊
ညီမလည်း ဂိုက်သင်တန်း တက်ခဲ့သေးတာလား?း) ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အဲဒီ နွားအုပ်တွေ အိမ်ပြန်ချိန်ကတော့ အရင်အတိုင်းပါပဲ၊ ကြည်နူးအေးချမ်းတဲ့ မြန်မာနှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ ညီမရေ..၊
လာလည်တာရော ကွန်မန့်အတွက်ပါ ကျေးဇူးပါဗျာ၊ အဆင်ပြေသလို ဝင်ပါထွက်ပါ..၊
ha ha.. you noticed the way he was looking at the display. What an observation! :) Thanks also for your appreciation on the cow pic. It's one of my favourites, too. Cheers !!!
ပုဂံကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း အနည်းဆုံး တစ်ခေါက်လောက်တော့ ရောက်ဖူးသင့်တယ်လို့ ထင်တာပါပဲဗျာ၊ ပုံတွေကို ဝေမျှလို့ ရပါတယ်၊ ကျေးဇူးပါနော်..၊
ပုဂံမှာ အေးအေးဆေးဆေး လည်ချင်၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင် တယ်ဆိုရင် သင်္ကြန်တွင်း မဟုတ်ခဲ့ရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်ဗျ၊ တော်ကြာ တပင်တပန်း ရိုက်ထားတာ လေးတွေက ရေတစ်ပုံးအောက်မှာ တခါတည်း ပျောက်သွားဦးမယ်၊း)
တစ်နှစ်တခါ၊ တခါသွား တစ်ပတ်လောက်နဲ့ ပုဂံကို လည်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ၊း) တစ်ပတ်ဆို တကယ့်ကို အေးအေးဆေးဆေး လေ့လာလို့ ရတယ်။
ပုဂံကိုတကယ်လွမ်းသွားတယ်။ တနေ့ က အလုပ်က ဆရာဝန်က ပုဂံအကြောင်းမေးတာနဲ့ ကိုညီဓါတ်ပုံတွေ
ငယ်ငယ်က အမေက ဘုရားတွေလိုက်ပြ၊ သမိုင်းကြောင်းတွေပြောပြနဲ့ ။ ပုဂံကို မရောက်တာကြာ
ခဲ့ပြီ။ တနေ့ နေ့ တော့။။။။
ှဓါတ်ပုံတွေကိုတွေ့တော့ ပုဂံကို တကယ်လွမ်းသွားပါတယ် သားသားကိုလည်း နှုတ်ဆက်ပါတယ် မင်္ဂလာပါလို့ :)
သင်္ကြန်တွင်းကြီးမို့ ပြန်ချင်နေတဲ့စိတ်က ပုဂံပုံတွေမြင်တော့ ပိုလို့ကိုပြန်ချင်နေတာ .. ဒီတခါပုံတွေထဲမှာ အောက်ဆုံးကတွက်ရင် ဒုတိယပုံ နွားတွေသွားနေတဲ့ပုံကို အကြိုက်ဆုံးဘဲ .. အသုတ်ကတော့ အရမ်းကြိုက်တဲ့ ပဲစောင်းလျားသီးသုတ်ဘဲ ဖြစ်မယ်လို့ထင်မိတယ် မကျည်းရွက်နုသုတ်လည်း တအားကြီုက်တယ် ...
ပုံတွေရိုက်ချက်လှလိုက်တာ မောင်ညီလင်းသစ်ရေ။ ပုဂံရဲ့အနှစ်သာရလေးပေါ်လွင်စေတယ်။ စားစရာတွေကလည်းစွဲမက်စရာ
နောက်တစ်ခေါက် ပြန်သွားချင်စိတ်ပေါ်လာပြီး)
ရိုက်ချက်တွေ ရေလည်လန်းတယ် ကိုညီရေ..ဘုရားပြုံးတော်မူနေတာကို ခုလို ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ရှင်းပြမှ နားလည်တော် မူတော့တယ်..မန်ကျည်းရွက်သုတ်လေးက တကယ်ကောင်းတယ်..ကိုစိုးတင့်နဲ့ တော့ တွေ့ နိုင်ကောင်းပါရဲ့ 
ဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်းတက် .ပုဂံနဲ့မန္တလေးအကြောင်းကိုအသေကျက်ခဲ့ပေမယ့် Culture Guide မဖြစ်ဘဲ BIRD WATCHING GUIDE ပဲဖြစ်ခဲ့တယ် ။ဂိုက်ဘ၀တောင် မမြဲခဲ့ပါဘူး။ ကျောင်းပြန်တက်ရတာနဲ့ ခနဘဲလုပ်ဖြစ်လိုက်တယ် ။ ပုဂံ ကိုရောက်ချင်လိုက်တာမှ တခါမှကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ဘူး ။ တနေ့တော့ရောက်အောင်သွားမယ်အကိုရေ .ကြိမ်းထားလေ လွဲလေဖြစ်နေတာဘဲ ။
အကို့ပုံတွေမြင်လေ ရောဂါပိုတိုးလေဖြစ်နေတယ် ။ဟိဟိ ( စကားမစပ် .မုန်လာဥတူးနေတဲ့ခလေးလေးတောင် အရပ်ပိုရှည်လာသလိုဘဲ မျက်စိအောက်တင်နော်း))
မြန်မာမှန်ရင် ပုဂံရောက်ဖူးရမယ်တဲ့...။ ပုဂံကို သုံးကြိမ်ထက်မနည်းရောက်ဖူးပေမယ့် တခါမှ ရိုးသွားတယ်လိုိ့ကိုမထင်ခဲ့ဘူး...။ ခုလဲ ကိုညီလင်းသစ်က ဘိန်းထည့်မရေးဘူးလို့ပြောထားလို့သာ ဒီပို့စ်ကပုံတွေနဲ့ အရေးအသားတွေကို ဒီပို့စ်ကနေကိုမခွာနိုင်အောင်ဆွဲဆောင်ထားကြတယ်...။ နေ၀င်ချိန်နဲ့ နွားသိမ်းချိန်တွေရိုက်ထားတာ သိပ်လှတာပဲ........။ နောက်တစ်ပို့စ်က ဘာအကြောင်းရေးမှာလဲ...စိတ်ဝင်စားနေတယ်..။
အဲဒီလို ဘုရားတွေ နောက်ခံနဲ့ ဖုန်တလုံးလုံး မြင်းလှည်းတန်းတွေများ မြင်ရင် ကျနော့်မှာ ဘာမှ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ် မရှိတော့ဘဲ ဒီလိုသာ ထိုင်ငေးနေချင် တော့တယ်..၊း)>>
စာတွေဖတ်နေရင်း ဆရာကြီး ဦးတင်မိုးရဲ့ ကဗျာလေးကို သတိရမိတယ်။ ဖုန်တထောင်းထောင်း လှည်းလမ်းကြောင်းမှာ ထနောင်းကြောင်ချစ် ဆူးရစ်ပွင့်ကာ မိုးမရွာသည် ရွာပါသော်လည်းတဖွဲဖွဲ ဆိုတာလေးပါ။
ကိုယ့်ရဲ့မွေးရပ်မြေကို အဝေးတနေရာကနေ မြင်ရတာဟာ တော်တော်ဆိုးဝါးတဲ့ ခံစားချက်ပါ။ ဘယ်တော့များမှ ပြန်လို့ ရမှာပါလိမ့်။ ပြန်လို့ ရရင်တောင် သွားချင်တဲ့နေရာတွေ သွားလုို့ ရရဲ့လားမသိ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အားကျမိပါတယ်။ စာရေးလဲ အရင်ကလို ကောင်းနေဆဲပါ။ လေးစားစွာဖြင့်။ ဆွေဆွေ
I like all of your wonderful photoes in this post. Last one is my favourite and Pahtoo thar myar is 2nd favourite.Alexy's concentration is not less than yours,I'm sure:D
Ma Eainthu looks prittier .I'm still fighting with heat and plan to go anyar later.
ပြောစရာ စကားမရှိ ..ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး အလွန်ကျေနပ်စွာ ပြန်သွား..
နှစ်သက်တယ်..ဆိုတာထက် ပြောစရာ စကားမရှိတော့ပါဘူး..။ ပုံ ၁၀၀လောက် ရိုက်လာတယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီမှာ ပွဲတစ်ပွဲလောက် လုပ်ဖို့အကြံပေးချင်တယ်..ကိုညီလင်းသစ်ရေ။
မြန်မာပြည်မှာနေပြီး ခုထိ ပုဂံကို မရောင်ဖြစ်သေးဘူး အကို
တစ်ယောက်သောသူ..... ပြန်လာရင်တော့ သွားဖြစ်မလားပဲ
ရင်ထဲစိမ့်ဝင်ခဲ့တဲ့ သားကလေးပုံကို မြင်လိုက်ရလို့ ချစ်စနိုးနဲ့ ကြည့်နေမိတယ်..
မအိမ်သူ ကို မြင်ခွင့်ရလို့လဲ ကျေးဇူး
အရမ်း ကျေနပ်တယ် အကို